Wednesday December 05, 2018 - 09:21:47 in Maqaallo by saleban Cilmi
Waxa aan si dhakhso ah usoo gaadhay xarun wayn oo markaasi Tareenada laga raaco,maaha hal tareen sidoo kale maaha laba iyo sadaxtoona ,waa Duni iswaydaranaysa .Waxa aan si qumaati ah isu taagay halkii loogu talagalay in Tareenka laga fuulo. Hadaba waxaa si kadiso ah ama lama-filaan ah aniga iyo dadkii boqolaalka ahaa ee Tareenka sugaayey halmar uun korkayaga nagaga yimi Shimbiro aad u farabadan, kadibna waxa ay si kalsooni iyo baqasho la'aani ay ku jirto xaab iyo cunto uga gurteen Cagahayaga hoos tooda iyo halkii aanu cidhbaha ku haynay.
Taxtaxaashkii iyo cabsi la'aantii ka muuqatay Shimbiraha waxa ay gaadheen in Qofkasta oo Tareen suga ah ay ka hoos gurtaan Ceeshka iyo cuntada uu Ilahay tusay iyaga uun ,mararka qaarna ay si dhibyar uga bootaalaystaan Kabaha iyo agabka yaryar ee shandadahu ka mid yihiin ee ay sitaan Tareen sugayaashu ee dhulka yaala .
Hadaba aniga oo Kursigii tareenka saaran ayaan wali waxa aan kasii xiiso go'i la'ahay sidii anshaha iyo ixtiraamki ku jiray ee isula falgaleen Dadka iyo Shimbirahu,waxa kaloo wali ishaydu kusii libdhan tahay shimbirahii oo wali kusii fuurara dhulka ,iyaga oo aan marnaba ka didin kana duulin sanqadha iyo dhawaaqa wayn ee socodka Tareenka kasoo yeedhaysay.
Maaha oo kaliya in aan idiinka sheekeeynaayo wixii aan maanta arkay,balse ujeedka qoraalkaygu waxa uu yahay wixii aan iswaydiiyey markii Shimbirahu ay Quudka ka raadsanayeen Dhulka gaar ahaan halka aan cagaha ku hayo iyo sababta ay iiga baqan'layihiin.
Hadaba su'aashu labaad ayaa waxa ay tahay shimbirtan Faransiiska iwm joogtaa kalsoonida intan leeg halkee ayay ka heshay? maxaase kalsooni darada ku abuuray Shimbiraheena?